Bit By Bit - Ethics - 6.4.1 Ixtiraamka Dadka
Ixtiraamka Dadka ku saabsan tahay sida loola dhaqmo dadka goboleedka iyo maamuusayo rabitaanka ay.
Warbixinta Belmont wuxuu ku doodayaa in mabda'a Ixtiraamka Dadku ay ka kooban tahay labo qaybood oo kala duwan: (1) shakhsiyaadka waa in loola dhaqmaa sidii madaxbannaan iyo (2) shakhsiyaadka leh madaxbannaanida madaxbanaani waxay xaq u leeyihiin ilaalin dheeraad ah. Iskudhicilku wuxuu u dhigmaa inuu qofku xakameeyo noloshooda. Si kale haddii loo dhigo, ixtiraamka dadku waxay soo jeedinayaan in cilmi-baarayaashu aysan wax u qaban karin dadka iyaga oo aan ogolaanshahooda. Xaalad ahaan, tani waxay qabataa xitaa haddii cilmi-baaruhu uu u malaynayo in wax dhacaya ay tahay mid aan dhib lahayn, ama xittaa faa'iido leh. Ixtiraamka dadka waxay keenaysaa fikradda kaqaybgalayaasha - ma cilmi-baarayaasha - waxay go'aansadaan.
Ficil ahaan, mabda 'ixtiraamka dadka ayaa loo fasiray inay micnaheedu tahay in cilmi-baadhayaashu ay tahay, haddii ay suurtagal tahay, helitaanka ogolaansho ka-qaybgalayaasha ka-qaybgalayaasha. Fikradda aasaasiga ah ee ogolaansho la wargeliyey waa in ka qaybgalayaasha loo soo bandhigo macluumaad ku haboon qaab qaab la fahmi karo ka dibna waa inay si ikhtiyaari ah u oggolaadaan inay ka qayb qaataan. Erey kasta oo ka mid ah shuruudahaas ayaa ah mawduucyo dood dheeri ah oo dheeraad ah iyo deeq waxbarasho (Manson and O'Neill 2007) , waxaanan u qeybin doonaa qaybta 6.6.1 ogolaansho wargalin ah.
Codsashada mabaadi'da ixtiraamka dadka ee sadexda tusaale ee bilawga cutubka ayaa tilmaamaya meelaha ay ka walwalsan yihiin mid kasta oo iyaga ka mid ah. Xaalad kasta, cilmi baarayaashu waxay wax u qabteen kaqaybgalayaasha-waxay isticmaaleen xogtooda (dhadhanka, dhirta, ama Waqtiga), waxay isticmaaleen kombiyuutarkooda si ay u gutaan hawlihii cabbiraadda (Encore), ama ku diiwaangashan tijaabada (Fiirinta Cudurka) -waxay bixiyaan oggolaanshahooda ama maqalkooda . Ku xadgudubka mabda'a ixtiraamka dadka ma si toos ah u dhigi karin daraasadahan anshax xumo; Ixtiraamka dadka waa mid ka mid ah afar mabda '. Laakiin ka fekeridda ixtiraamka dadka waxay soo jeedinayaan siyaabo ka mid ah daraasadaha loo hagaajin karo anshaxa. Tusaale ahaan, cilmi baarayaashu waxay heli karaan nooc ka mid ah oggolaanshaha ka-qaybgalayaasha kahor intaanay bilaabmin daraasadda ama ka dib markay dhammaatay; Waxaan ku soo noqon doonaa ikhtiyaarradan markaan ka wada hadlayo ogolaansho la igu wargeliyey ee ku qoran qaybta 6.6.1.